Politika momba ny tsiambaratelo | NAB Show News | 2021 NAB Show Media Partner sy mpamokatra ny NAB Show LIVE. News Engineering Engineering
Home » politika fiarovana fiainan'olona
Broadcast Beat - Politika momba ny tsiambaratelo
Zava-dehibe aminay ny fiainanao manokana, noho izany izahay dia namolavola Politika momba ny tsiambaratelo izay misy fampahalalana manan-danja toy ny hoe iza izahay, ahoana ary maninona no manangona ny mombamomba anao manokana izahay, ary koa ny fomba ampiasainay sy hitahirizanay ity fampahalalana ity, ao anatin'izany ny fidirana aminao ary ny fampiasana ny tranokalanay sy ny rindranay (fampiharana). Mangataka aminao izahay mba hamaky tsara azy io satria misy fampahalalana manandanja ary manazava ny fomba hifandraisana aminay raha manana fanontaniana ianao. Azafady mba mariho ihany koa fa amin'ny fampiasana ny serivisinay dia heverinay fa faly ianao manamboatra ny mombamomba anao manokana araka ny voalaza ato amin'ity Politika momba ny tsiambaratelo ity.
Ny Broadcast Beat dia tetikasan'ny fampitam-baovao nomerika natao hanomezana vaovao sy fampahalalam-baovao amin'ny fampielezam-peo, sary mihetsika ary ny indostrian'ny famokarana. Mipetraka ao amin'ny Avenue 4028 NE 6th, Fort Lauderdale, FL 33334 izahay. Ny lahatahantsika amin'ny contact dia 954-233-1978. Ny fidirana amin'ny tranonkalanay dia misy mivantana avy amin'ny tranokalanay www.broadcastbeat.com. Ny Beat Beat dia manolo-tena hiaro ny fiainana manokana sy ny angonin'ireo izay manaraka ny votoatintsika.
Ny mombamomba anao manokana
Mankasitraka anao izahay manaraka ny vaovao sy ny fampahalalana omenay ho an'ny indostrianay ary mieritreritra ny fampahalalana mora tohina momba anay. Ny tanjonay dia ny hiantoka ny fandefasana anay ary hitazona ny tsiambaratelonao. Ho fanampin'izay, rehefa mizaha ireo pejin'ny tranonkalantsika ianao dia manara-maso izany ho an'ny tanjona fanadihadiana toy ny fitsapana ireo endrika vaovao sy sariaka ho an'ny mpampiasa ary lohahevitra mahaliana anao. Hotehirizinay koa ny fampahalalana izay apetrakao an-tsitrapo; ohatra, ny mailaka hifandraisanao, ny tolo-kevitry ny programa, ny fangatahana mifandraika amin'ny fandaharana amin'ny seho indostrialy, ny fangatahana fanadihadiana, taratasy fotsy, webinar ary fifaninanana.
Fiarovana ny mombamomba anao manokana
Ny filazam-baovao momba ny tsiambaratelo dia milaza aminao izay angon-drakitra manokana (PD) sy ny angona manokana (NPD) izay azontsika angonina avy aminao, ny fomba famorantsika azy, ny fomba hiarovantsika azy, ny fomba ahafahanareo miditra sy manova izany. Ny fampahafantaranay manokana momba ny fiainana manokana dia manazava ihany koa ireo zo ara-dalàna sasany izay anananao amin'ny fanajana ny mombamomba anao.
Raha mampiasa ny tranokalanay sy ny apps izahay, ary mametraka ny angon-drakitra manokana aminay, dia mety hanana zo sasantsasany ianareo ao amin'ny General Data Protection Regulation (GDPR) sy lalàna hafa. Miankina amin'ny fototra ara-dalàna amin'ny fanitsiana ny angon-drakitrao manokana, mety manana ny sasany amin'ireto zo ireto ianao:
Zo tokony hampandrenesina - manan-jo hampahafantarina anao momba ny angon-drakitra manokana angoninay aminao izahay, ary ny fomba fanodinay azy.
Ny zon'ny fidirana: manan-jo hanana fanamafisana ianao fa eo am-pikarakarana ny angon-drakitrao manokana ary manana ny fahafaha-miditra amin'ny angon-drakitrao manokana.
Ny zon'ny fanitsiana - zonao ny manitsy ny mombamomba anao raha tsy marina na tsy feno.
Ny zo hamafana (zonao hadino) - Manan-jo hangataka ny fanesorana na famafana ny angon-drakitrao manokana ianao raha tsy misy antony manery anay hanohizana ny fanodinana azy.
Ny zo hamepetra ny fanodinana - Zonao ny 'manakana' na mametra ny fikirakirana ny angon-drakitrao manokana. Rehefa voafetra ny angon-drakitrao manokana, mahazo alalana hitahiry ny angon-drakitrao izahay, fa tsy hanodina izany lavitra.
Ny zon'ny mpiasa azo itokisana - Manan-jo hangataka sy hahazo ny angona manokana nomenao anay izahay ary hampiasa izany amin'ny tanjonareo manokana. Hanolotra ny angon-drakitra ho anao izahay ao anatin'ny 30 andro ny fangatahanao. Raha te-hangataka ny angon-drakitrao manokana ianao, azafady mba mifandraisa aminay amin'ny fampiasana ny vaovao any an-tampon'ity fanamarihana manokana ity.
Ny zon'ny manohitra - Zonao ny manohitra anay amin'ny fanodinana ny angon-drakitrao manokana noho ireto antony manaraka ireto: Ny fanodinana dia nifototra tamin'ny tombontsoa ara-dalàna na fanatanterahana asa iray ho tombontsoan'ny besinimaro / fampiharana ny fahefana ofisialy (anisan'izany ny fanoratana); Marketing mivantana (ao anatin'izany ny profiling); ary fanodinana ho an'ny tanjon'ny fikarohana sy statistika siantifika / tantara. Zo mifandraika amin'ny fanapaha-kevitra mandeha ho azy sy ny famokarana profil.
Fanapahan-kevitra sy fanoratan-kevitra ataon'ny isam-batan'olona - Hanan-jo tsy hiharan'ny fanapahan-kevitra mifototra amin'ny fanodinana mandeha ho azy fotsiny ianao, ao anatin'izany ny fanoratan-kevitra, izay miteraka vokatra ara-dalàna momba anao na misy fiantraikany lehibe aminao koa.
Famoahana fitarainana amin'ny manampahefana - Azonao atao ny mametraka fitarainana amin'ny manampahefana mpanara-maso raha toa ka tsy novitaina ny fampahalalana nataonao tamin'ny fanarahana ny fitsipika ankapobeny. Raha toa ka tsy mahavita mitaky ny fitarainanao araka ny tokony ho izy ny manam-pahefana mpanara-maso, dia mety hanana zo hitsabaka amin'ny fitsarana ianao. Ho an'ny antsipiriany momba ny zonao eo ambanin'ny lalàna, tsidiho www.privacyshield.gov/
Tsy hanome angona amin'ny fampiharana ny lalàna isika raha tsy misy didim-pitsarana. Raha izany no hitranga, dia hanandrana hampahafantatra anao momba ilay fangatahana izahay raha toa ka tsy voasoroka ara-dalàna.
Rehefa mampiasa Broadcast Beat isika dia afaka mampiasa "cookies", "cycles web", ary fitaovana mitovy amin'izany mba hanarahana ny asanao. Ireo teboka madinidinika ireo dia voarakitra ao anaty fiara sarotra, fa tsy ao amin'ny tranonkala Broadcast Beat.
Mampiasa cookies izahay hanampiana anao hitety ny tranokalan'i Broadcast Beat ho mora araka izay azo atao, ary hahatadidy ny vaovao momba ny fotoam-pivorianao izao. Tsy mampiasa an'ity haitao ity izahay hitsikilo anao na hanafika ny fiainanao manokana. Azonao atao ny manafoana ny cookies sy ny teknolojia fanarahana amin'ny alàlan'ny tranokalanao.
Fiarovana sy Fikojakojana
Ny tranokalan'ny Broadcast Beat dia manana fepetra fiarovana manara-penitra amin'ny indostrialy hiarovana ny fatiantoka, ny fampiasana tsy araka ny tokony ho izy ary ny fanovana ny vaovao eo ambany fifehezana anay. Na dia tsy misy izany antsoina hoe "filaminana tonga lafatra" izany amin'ny Internet, dia handray ny dingana mety rehetra izahay mba hiantohana ny fiarovana ny mombamomba anao.
Ny angon-drakitra rehetra dia alefa amin'ny alàlan'ny SSL / TLS rehefa nampitaina teo amin'ny servers sy ny navigateur. Ny angon-drakitra momba ny angon-drakitra dia tsy voahodina (satria mila haingana haingana), saingy mandroso be mba hahazoana antoka ny angon-drakitrao.
Tsy hivarotra na hizara izany angon-draky izany amin'ny antoko fahatelo izahay.
Miezaka mitahiry famerim-bola izahay, natokana ho an'ny fanarenana ny rafitra mahatsiravina, mandritra ny andro 30. Ny kitapo indray dia nodiovina tamin'ny andrana mandeha amin'ny andro 30. Rehefa voavaky ny mailaka ary tsy voavonjy, dia nodiovina amin'ny famoahana 30 andro azy.
Fiovana sy fanontaniana
Ny fanitsiana ity fanambarana ity dia halefa amin'ity URL ity ary hahomby amin'ny famoahana azy. Ny fampiasanao tsy tapaka ity tranokala ity aorian'ny famoahana ny fanitsiana, fanovana, na fanovana dia mamaritra ny fanekena ny fanitsiana. Hanamarina anao izahay momba ny fanovana lehibe amin'ny alàlan'ny fanandevozana ny tompon'ny kaonty na amin'ny fametrahana fampahalalana malaza ao amin'ny tranokalanay. Raha manana fanontaniana ianao mikasika ity fanambarana manokana momba ny fiainana manokana ity na ny fifandraisanao amin'ny Broadcast Beat, afaka mifandray aminay ianao [email voaaro].